Inotsigira uye inopikisa muIbex 35 | Ehupfumi Zvemari
Inotsigira uye inopikisa muIbex 35
Hapana mumwe wevamiriri vezvemari anopokana kuti indekisi inosarudzika yemari inoshanduka, iyo Ibex 35, iri mu yakajeka mamiriro ekupedzisira. Ndokureva, kune chero munhu pasi chero bedzi rutsigiro uye nematanho ematanho ari kutora yakawanda kugogodza pasi haapfuure. Zvichakadaro, zvakaoma kwazvo kuita mashandiro ekuona iko kusevha, kunze kwekunge mabasa ekutengesa aine ruzivo. Kunyangwe pasina munhu anokahadzika, izvo nekukurumidza kana gare gare, iwe hauzove nesarudzo kunze kwekutora imwe kana imwe nzvimbo pachinzvimbo chekutenga kana kutengesa.
Mukati meichi chirevo chizere, isu ticha tsanangura kuti ndedzipi nzira dzekudyara dzaunogona kuendesa kubva zvino zvichienda mberi. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchinzvimbo chekukwiridzira mashandiro ako mumisika yemari. Iko kutya kwekuderera kwehupfumi padanho repasi rose, hapana mubvunzo kuti ichaita basa rakakosha kumusika wemasheya indices tevera imwe kana imwe tsika. Zvekuti nyika musika wemusika ungabude mune zvazvino mamiriro ekupedzisira mairi kwemwedzi yakawanda.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti sekureba sekunge aya mazinga asina kupfuurwa, hapana chinhu kune vashoma nevepakati varimi vanoita. Uye izvo muchikamu chayo chepasi zvakasimbiswa pakati pe8700 uye 8600 mapoinzi uye muchikamu chinosimudzira chegwara padyo nemapoinzi e9300 kana zvakadaro. Ivo, mune chero mamiriro ezvinhu, iwo matanho anozofanirwa kuongororwa kubva zvino zvichienda mberi. Kuti tivhure zvinzvimbo mune imwe nzira kana imwe uye kwete kuganhurirwa kumabasa mapfupi akadaro anogadzirwa munzira dzekupedzisira senge iyo yatinozviwana isu pari zvino.
1 Chii chaunofanira kuita kana midhiya ichiputsa?
2 Tora pasi kurwisa muhomwe
3 Kana kufamba kwenhema kuchiitika
4 Vazvione munguva
Chii chaunofanira kuita kana midhiya ichiputsa?
Kana mumazuva anotevera kana mavhiki paine kuzorora kwakanyanya muhuwandu hwekutengesa iyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, ichave iri nguva yekuti isu tese tinomirira kutengesa zvinzvimbo zvedu pamusika wemasheya. Nokubvisa zvachose kwechikonzero chakajeka uye ndiko kuti isu tichava nemikana yekutenga zvikamu pamitengo yemakwikwi. Saka kuti nenzira iyi, mukana wekudzokorora wakakwira zvakanyanya kupfuura kusvika zvino. Ndokunge, kuwedzera zvakanyanya mari inowanikwa mukuvhura mashandiro mumisika yemari.
Iri zano rekudyara rinotakura njodzi shoma, asi pamusoro pazvo zvese zvichatibatsira kuchengetedza kuchengetedza kwedu kubva ku kusagadzikana mumisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uko iko zvino kusingapinde kana chikamu chekuongorora kwedu kwerutsigiro uye kuramba muIbex 35. Hazvishamise kuti mamiriro ezvinhu aya anogona kutungamira indasitiri yemusika wemasheya weSpain kuti iongorore nhanho ye8000. Mapoinzi kana mabhureki akaderera. Nengozi iri pachena munzvimbo dzedu mumisika yemari.
Tora pasi kurwisa muhomwe
Nepo zvichipesana, kufamba kwakapesana, ndiko kuti, kupfuura mwero wekurwisa uyo Ibex 35 parizvino chiratidzo chakajeka dzoka kunotenga kumutambo weMadrid. Nekuti zvirizvo, inogona kuve danho kwaunogona kutangazve kudyara muzvikwereti. Chaizvoizvo nekuti njodzi dzichava dzakaderera uye dzichanyanya kuwanda kupfuura pakutanga. Mupfungwa iyi, haigone kukanganikwa mune chero rukudzo ndipo panopikiswa kushorwa, inova rutsigiro kubva pakuramba ikoko.
Uyezve, mushure nyore kukunda kurwisa zvakasununguka kwazvo, chinhu chinowanzoitika ndechekuti kune yakasimba kwazvo kutenga kumanikidza. Iko kufarira kwechikamu chevadiki nepakati-saizi kune kwakanyanya kusimbiswa, zvirinani mukati memavhiki anotevera maitirwo akaitwa aya. Uye izvo zvinogona kushandiswa nevaponesi kutora chinzvimbo uye kuita zvinobatsira mafambiro akasarudzika mune hunhu hurikuitika nemamiriro aya. Iko iko mutemo wechigunwe ndeyekuti kune zvakawanda zvekuwana pane kurasikirwa.
Kana kufamba kwenhema kuchiitika
Izvo zvinogona zvakare kuitika, kunyangwe zvisiri zvakajairika, kuti kufamba uku mukushandurwa kwemitengo kunyepa. Izvi zvinoreva kuti dzokera kunzvimbo dzavo dzepakutanga uye saka hapana kutyorwa kwezvitsigiso kana zvinopesana. Uye pakadaro, marongero atakakurukura pamusoro anenge asisina basa. Kana zvisiri, pane kudaro, zvichave zvakafanira kugadzirisa kutengesa kana kutenga, zvichiteerana, nekuti zvinogona kusanganisira njodzi dzakanyanya mukushanda. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune ayo musimboti.
Chimwe chinhu chinofanirwa kukosheswa nevashambadzi vadiki nepakati ivhu rekubvumirana. Nekuti zvirokwazvo, kufamba uku kunowanzo kuperekedzwa pamwe chete huwandu hwekutenga yakanyanya kukwirira uye ndeavo anopa kuvimbika pakuputswa kwezvitsigiso uye zvinopesana nehunyanzvi hwekuongorora kweakakosha emusika wemasheya. Nekuvimbika kwakakwirira pamusoro pemhedzisiro yeichi chakanyanya hurongwa uye icho chinoteverwa nevashambadziri vane kudzidza kwakanyanya mune irworwu mashandiro pamusika wemusika.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvakakosha kuti uve panguva yekuchinja kwemaitiro muhunhu. Nekuti kana vakaonekwa vakanonoka hazvichaite kubatsirwa nezviitiko izvi kuita kuti mari yakadyarwa ibatsire. Izvo zviri kumagumo ezuva izvo zvinosanganisirwa mukirasi ino yezvekudyara nzira. Hazvishamisi kuti hunyanzvi mukufamba uku hwakasimba chose kuti huve nekuwana kukuru kwazvo kuwana nguva dzese.
Kune izvi, zvichave zvakakosha kuve negirafu iripedyo kuti uzive zviri kuitika nemitengo yemasheya panguva dzese kana zvirinani muchikamu chega chega mumisika yemari. Nemikana mikuru yekuzadzisa zvinangwa zvedu nenzira inoshanda uye kana ichigonawo kunge isina njodzi. Pasina kutya zvikanganiso zvekukosha kwakakosha muzvikwereti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Inotsigira uye inopikisa muIbex 35
Kuenzana mikana yekudyara